2012 – နှစ်သစ်ကြို – စားပွဲ – Thet Nandar
Sparkling Apple-Grape နှင့် ကိုကာကိုလာ
ပုစွန်ကင် နှင့် တို့စားဖို့ အချဉ်
ကင်ပီး ဂီးထောပတ်သုတ်ပီး ကင်ထားသော အမဲသားကင်
မိသားစု ညစာ စားပွဲ
YouTube : Happy New Year Nyan Cat !
ဒီနေ့ 12.31.2011 ကနေ စပီး ဘလော့ ပိုစ့်မှာ အစားအသောက် ဓာတ်ပုံများကို ပိုစ့် အပေါ်မှာ တင်ထားပီး၊ အောက်နားကျမှ မိသားစု အိမ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ချက်၊ ပြုတ်၊ စားသောက်တယ် ဆိုတာကို ပြောပြတဲ့ ** ချက်၊ စားနည်း ** အနေနဲ့ သီးသန့် ခွဲပီး ပိုစ့် ပုံစံ အသစ် စ တင်လိုက်ပါတယ်။
မီးသွေးမီးဖိုနဲ့ပဲ မီးအသင့်သင့် အနေအထားနဲ့ မှန်မှန်လေး ကင်ပေးထားသော အမဲသားကင်။ ကင်နေတုံးမှာ အမဲသား အတွင်းပိုင်းသားပါ ကျက်အောင် ကင်တဲ့ ဇွန်းနဲ့ အမဲသားတုံးကို ဖိဖိပီး ကင်ပေးထားတယ်။ အသားကျက်မ ကျက် အလွယ်သိနည်းက အသားတုံးကို ဓါးနဲ့ လှီးကြည့်လိုက်ရင် အတွင်းပိုင်း အသားအနေအထားက အသွေးရောင် လို မနီပဲ အသားရောင် သန်းလာရင် အသားကျက်ပါပြီ။ အတွင်းပိုင်း အသားက ပန်းရောင် သို့မဟုတ် နီနီကြီးဆိုရင် အသားမကျက်သေးပါဘူး။ အသားတုံးကို ဟိုဘက် ဒီဘက် လှန်ပေးပီး။ ကင်တဲ့ ဇွန်းနဲ့ ဖိဖိပေးရင် အသားအကျက်ညီပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် ပုစွန်ကို အခွံခွါပီး၊ ကျောက ချီးကြောင်းထုပ် … ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်မှုန့် နဲ့ နှယ်ပီး ကင်တဲ့ တုပ်ချောင်းမှာ တပ်ပေးလိုက်တယ်။ လူကြီးတွေအတွက်ကတော့ ပုစွန်ကို ခေါင်းနဲ့ လက်က ခြေတွေ ကတ်ကျေးနဲ့ ဖြတ်၊ ပုစွန် ကျောက အခွံကို ကပ်ကြေးနဲ့ ခွဲပီး ချီးကြောင်းထုပ်။ ဆားရေ နဲ့ စိမ်ပီး တုပ်ချောင်းမှာ တပ်၊ အရမ်းကြီး မကျွတ်လွန်း အရမ်းကြီး မပျော့လွန်း ကင်ထားပါတယ်။ (ပုစွန် မကင်မှီပုံ)
မီးသွေးနဲ့ ချက်တာမို့ အိမ်အပြင်မှာပဲ ကင်စားကြပါတယ်။ ဂတ်စ်နဲ့ ကင်တာလည်း အပြင်မှာပဲ ကင်စားကြပါတယ်။ အိမ်ထဲမှာ ချက်တဲ့ မီးဖိုက လျှပ်စစ်မီးဖိုပါ။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ဂတ်စ်မီးဖိုနဲ့ ချက်တယ်။ ချက်တဲ့ အခါတိုင်း ပြူတင်းပေါက်ကို ဖွင့်ပီး ချက်တယ်။ မိုးရွာလည်း ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်ပီး ချက်တာပါပဲ။ ပြူတင်းပေါက်မှာ sunshape ရှိတယ်။ မိုးရေ မပက်ဘူး။
ဒယ်ဒီ ကိုယ်တိုင် ကင်နေသော ပုစွန်ကင်၊ မာမီက ကင်ဖို့အတွက် အသားတွေကို အဆင့်သင့် ပြင်ဆင်ပေးထားရုံပါပဲ။
ဒီလိုမျိုး ထင်းရှုးဆီ ချောင်းတွေကို အကင် တုပ်ချောင်း တချောင်းစာ သာသာ အနည်းငယ်သေးအောင် ဓါးနဲ့ ခွဲခြမ်းစိတ်လိုက်ပီး ကင်မယ့် မီးဖိုမှာ အရင်ဆုံး မီးသွေးတုံးတွေကို အရင်ဆုံး တောင်ပုံစံ ပုံပီးမှ ထင်းရှုးဆီချောင်းတွေကို ၃ ၊ ၄ ချောင်းလောက် ဆိုင်ပီး မီးညှိ၊ လေတော့ ကွယ်ထားလိုက်တယ်။ ဒါမှ ထင်းရှုးဆီ ချောင်းကနေ တဆင့် မီးသွေးတုံးတွေက မီးတောက်လာမယ်။
Angel ချောကလက်ဆန် ဖြူးပေးထားတာ။ ကိတ်မုန့်ကတော့ ၀ယ်တာ။
ဒီပိုစ့် တင်နေတုန်း Browser ၂ခု ဖွင့်ထားလိုက်တယ်။ တခုမှာ … ဘလော့ပိုစ့် သုံးပီး။ နောက်တခု Browser မှာ http://www.cnn.com/video/?%2Ftab%2Flive#/video/cvplive/cvpstream1 Time Square awaits 2012 ကို Live ကြည့်တယ်။ အဲဒီနေရာကို လူကိုယ်တိုင်တော့ ကလေး ၂ယောက်နဲ့ အတူ သွားတော့ မသွားနိုင်ဘူး။ တော်တော်အေးမှာပဲ။ လူငွေ့ ရိုက်ပီး နွေးနေပေမယ့် အေးတော့ အေးနေမှာ။ အခုဆိုရင် ည ၁၁း၄၈ … နောက် ၁၂ မိနစ် ဆိုရင် နှစ်သစ် တခုကို ကူးပြောင်းပါပီ။
2010 – နှစ်သစ်ကြို – ညစာ စားပွဲ (ရွှေမြန်မာ)
2011 – နှစ်သစ်ကြို – ညစာ စားပွဲ (ရွှေမြန်မာ)
2012 – နှစ်သစ်ကြို – ညစာ စားပွဲ (အမေရိကား) Now
January 1, 2012 Thet Nandar
4 thoughts on “2012 – နှစ်သစ်ကြို – စားပွဲ”
I hope 2012 isayear of great happiness and success for you. Haveawonderful new year!
ဆဲဗင်း ဒီဇင်ဘာ ….
Happy ** 2012 ** to you !!
Ko Ko Sein (YGN) ….
ကျေးဇူးပါ ဦးကိုကိုစိန် ….
ဦးကိုကိုစိန် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်စုံရပါလို၏။
ဦးကိုကိုစိန် ရဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းက ကျွန်မ အလိုချင်ဆုံး နှစ်သစ်ဆုတောင်းပါ။
ဦးကိုကိုစိန်တို့ မိသားစု အားလုံး ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး သုံးပါးစလုံး ကျန်းမာကြပါစေ … ချမ်းသာကြပါစေ … ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပါစေ … စိုးရိမ် ကြောင့်ကြခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေ …. သောက ခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းပါစေ … စီးပွား ဥစ္စ္စာ ဒီရေ အလား တိုးတက် ကြီးပွားကြပါစေ …